यस्ता खानेकुराहरु कहिल्यै नराख्नुहोस् फ्रिजमा, खाएमा स्वास्थ्यमा हुनेछ ठुलो हानी
अप्रील 15, 2019 अप्रील 15, 2019 साइन्स इन्फोटेक	1 Comment खानेकुराहरु, फ्रिज, स्वास्थ्य
प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय फ्रिज प्रयोगकर्ताहरु नेपालमा पनि बढी रहेका छन् । गर्मीको समयमा खाना छिट्टै बिग्रने गर्छ । त्यसैले खाना बिग्रन नदिनको लागी खानालाई फ्रिजमा राखिने गरिन्छ । तर कतिपय खानाहरु हामीले फ्रिजमा राख्दा त्यस्ता खानेकुराहरु स्वास्थ्यको लागी निकै हानिकारक हुने गर्छन् । कतिपय खानेकुराहरु फ्रिजमा राख्दा तिनीहरुमा रहेको पौष्टिक तत्वहरु नष्ट भएर जान्छन् । हरेक खानेकुरालाई ताजा राख्न फ्रिजको प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर, एक स्वास्थ्य रिपोर्ट अनुसार सबै खानेकुरा फ्रिजमा ताजा नरहने कुरा पत्ता लागेको छ । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले फ्रिजमा राख्न नहुने खानेकुराहरु यस प्रकार छन् ।
टमाटरलाई फ्रिजमा राख्नाले यसको स्वाद बिग्रिन्छ । फ्रिजको चिसोले टमाटरको भित्री झिल्ली टुट्छ । जसका कारण यो मुलायम हुन जान्छ । फ्रिजमा राख्दा टमाटर भित्रको ‘मेम्ब्रन’ टुट्छ र टमाटर चाँडै गल्छ अनि बिग्रिन्छ ।
यसबाट इथाइलिन ग्यास निस्किन्छ जसले आसपासका फलहरुलाई चाँडै पकाइदिन्छ ।
फ्रिजभित्रको चिसो तापक्रमले पाउरोटीमा डिहाइड्रेसनको प्रक्रिया छिटो हुन्छ । यसबाट पाउरोटी चाँडै सुक्छ र बिग्रन्छ ।
आलु पनि फ्रिजमा राख्नु हुँदैन । फ्रिजमा राखिएको आलुमा पानी बढी हुन्छ र यसले स्वाद पनि विगारिदिन्छ । चिसो तापमानमा आलु राख्दा स्टार्च सुगरमा बदलिन्छ । आलुलाई पेपर ब्यागमा राखेर घरको अँध्यारो र चिसो ठाउँमा राख्दा राम्रो हुन्छ ।
धेरै दिनसम्म अण्डालाई फ्रिजमा राख्दा यसको योक सुक्छ र न्युट्रियन्स कम हुन सक्छ ।
६. लसुन र प्याज
आलुको जस्तै लसुन र प्याजमा पनि फ्रिजमा राख्दा उस्तै समस्या आइलाग्छ । प्याजमा चिसोपना धेरै हुन्छ र फ्रिजमा राख्दा यसको बोक्रा गल्छ । लसुन र प्याज पनि चिसो र अँध्यारो ठाउँमा राख्नुपर्छ ।
७. जैतुनको तेल
जैतुनको तेल (ओलिभ आयल) खान मात्रै होइन, कपाल र शरीरमा प्रयोग गर्न खरिद गरिन्छ । तर, यसलाई कहिल्यै फ्रिजमा राख्नु हुँदैन । कम तापक्रममा राख्दा यस्तो प्राकृतिक गुण नष्ट हुन्छ । सूर्यको प्रकाश, ग्यास स्टोभको आसपासमा पनि यसलाई राख्नु हुन्न । जैतुनको तेल फ्रिजमा राख्नुहुँदैन । कम तापमानमा यो संघनित भएर मही जस्तै गाढा हुन्छ ।
धेरैले रोटी खराब हुन्छ भनेर यसलाई राख्ने ठाउँ फ्रिज रोज्छन् । फ्रिजमा राखेको रोटी चाँडै सुक्छ र यसमा रहेको तत्व हराउँछ ।
तुलसी फ्रिजमा राख्नाले यसको आसपासका राखेका खानाको समेत सुगन्ध सोस्छ वा तुलसीको सुगन्ध हावी हुन्छ । जसले गर्दा अरुको समेत स्वाद हराउँछ । तुलसी पानीमा राख्नुपर्छ ।
१०. कफी पाउडर
कफी कहिल्यै फ्रिजमा नराखौँ । यसको स्वाद बिग्रने मात्रै होइन, आसपासको खानामा यसको सुगन्ध हावी भइदिन सक्छ । कफीले फ्रिजमा राखिएका अन्य वस्तुहरुको वास्ना सोस्छ र यसको आफ्नो वास्ना कम हुन्छ ।
११. निबुवा र सुन्तला
यसमा साइट्र एसिड हुन्छ, त्यसैले फ्रिजभित्रको चिसो सहन सक्दैन । फ्रिजमा राख्दा यसमा दाग आउछ र स्वाद पनि फेरिन्छ ।
यसको डब्बालाई पातलो प्लाष्टिकले बेरेर राख्नुपर्छ । फ्रिजमा राख्दा मह गाढा हुन्छ र यसमा क्रिस्टल बन्न थाल्छ ।
फ्रिजमा राख्दा यसमा रहेको एन्जाइम सक्रिय हुन्छन् र स्याउ चाँडै पाक्छ । राख्ने नै हो भने कागजमा लपेटेर राख्नुपर्छ ।
अचारमा भिनेगार धेरै हुन्छ । यसलाई किचेनको चिसोमा राख्दा राम्रो हुन्छ । यसलाई फ्रिजमा राख्दा अन्य खानेकुरा समेत खराब गरिदिने खतरा हुन्छ । एजेन्सी
१५. हरियो पत्ता भएका फलफुल
केही दिनसम्म फ्रिजमा राख्दा पत्ता सुक्छ र तरकारी चाँडै बिग्रिन्छ ।
१६. तरबुजा र खरबुजा
काटेपछि तरबुजा र खरबुजा फ्रिजमा राख्न सक्रिन्छ तर सिंगो दानालाई कहिल्यै फ्रिजमा नराख्नुहोस् । यो फलमा अत्यधिक एन्टिअक्सिडेन्ट हुन्छ, जुन फ्रिजमा राखेपछि बिग्रिन्छ । काँक्रो, तरबुजा र खरबुजा खानुअघि एकैछिन भने चिसो बनाउनका लागि मात्रै फ्रिजमा राख्न सकिन्छ ।
← महिलाहरुले स्वस्थ रहन अपनाउनुपर्ने १० सुझावहरु
उपभोक्ता जनहितका लागि नेपाल आयल निगम लिमिटेड सूचना →
सेप्टेम्बर 30, 2019 सेप्टेम्बर 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक 6
अक्टोबर 16, 2019 अक्टोबर 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक 3
जनवरी 25, 2018 नोभेम्बर 12, 2018 साइन्स इन्फोटेक 6
One thought on “फ्रिजमा राख्न नहुने खानेकुराहरु”
Pingback:होशियार ! फ्रिजमा राखेको चिसो पानी पिउँनु स्वास्थ्यको लागि हानिकारक